Falanqanta Kulamada AC Milan Vs FK Crvena, Iyo Roma Vs SC Braga Ee Europe League
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqanta Kulamada AC Milan Vs FK Crvena, iyo Roma Vs SC Braga ee Europe League
Kooxda Ac Milan ayaa garoonkeeda San Siro ku soo dhaweeneysa kooxda FK Crvena lugta labaad ee Wareega 32-aad ee Europe League xili lugta hore uu ku soo dhamaaday bar-baro 2-2.
AC Milan:- ayaa la filayaa in Khamiista ay weyso Daniele Bonera, Brahim Diaz iyo Ismael Bennacer.
Diogo Dalot ayaa ku soo laabtay kursiga keydka kulankii axada ee Derby ka dib markii uu seegay safarkii Serbia, waxaana uu tartan ugu jiraa inuu halkaan ka bilaabo, laga yaabee inuu ka ciyaaro daafaca bidix ka dib markii Pierre Kalulu uu wacdarro dhigay daafaca midig.
Milan ayaa martigelisay Crvena Zvezda labo jeer oo hore, barbaro 1-1- ah European Cup 1988-89 ka hor inta aysan 1-0 ku garaacin isreebreebka Champions League 2006-07, goolka Filippo Inzaghi.
Crvena Zvezda waxay ku guuleysatay kaliya mid ka mid ah 12-kii horyaal ee ugu horreeyay ee Yurub ah ee ay la yeelatay kooxaha Talyaaniga (D3 L8), ciyaar 2-0 ay kaga badisay Chievo wareega koowaad ee UEFA Cup bishii Oktoobar 2002.
Milan ayaa laga badiyay seddex ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeysay oo ay ku ciyaartay garoonkeeda tartamada UEFA Europa League iyo UEFA Cup (W4), iyadoo laga badiyay sida ugu badan ee looga adkaaday 38-dii kulan ee ugu horreeyay tartamadaas.
Crvena Zvezda ayaa dhalisay kaliya seddex jeer todobadii kulan ee ay marti ahaayeen UEFA Europa League, iyagoo ku guuldareystay inay shabaqa soo taabtaan shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay.
Kulamada Kale ee Dhacaya Roma Vs SC Braga
Kooxda Roma ee Dalka Taliyaaniga ayaa dhankeeda garoonkeeda ku soo dhaweeneysa kooxda Braga lugta labaad ee Wareega 32-aad ee Europe league xili kulankii hore ay Roma ku badisay 2-0.
Garoonka Olimpico, Rome
Roma ayaa laga yaabaa inay weydo seddex daafac marka ay martigelinayaan Braga.
Leonardo Spinazzola ayaa laga yaabaa in looga baahdo daafaca dhexe, sida uu ahaa usbuuc dhammaadkii.
Edin Dzeko wuxuu soo maray dhaawac muddo dheer ah laakiin wuxuu ku soo laaban doonaa hogaaminta kulankan.
Roma ayaa wajihi doonta AC Milan dhamaadka usbuucan, waxaana laga yaabaa inay saameyn ku yeelato line-upkooda madama markii ay lugtii hore ku soo badisay 2-0.
Braga:- Ricardo Esgaio ayaa casaan qaatay lugtii hore, waxaana haatan laga ganaaxay kulanka.
Roma ayaa badisay afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay oo ay gurigeeda kula ciyaartay kooxaha reer Portugal (D1 L1), kulankoodii ugu dambeeyay ee noocan oo kale ah wuxuu ahaa 2-1 ay kaga badiyeen FC Porto bishii Febraayo 2019.
Braga ayaa badisay mid ka mid ah afartii kulan ee ay marti ahaayeen kooxaha Talyaaniga (D1 L2), iyagoo garaacay Parma 1-0 UEFA Cup 32 ee ugu dambeysay 2006-07. 18 jir Diego Costa ayaa dhaliyay goolka guusha.
Guuldaradii kaliya ee Roma ka soo gaadhay 18-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay ku ciyaartay garoonkeeda tartamada yurub ayaa ahayd mid ka dhan ah Real Madrid bishii November 2018 (W13 D4) – way badisay dhamaan 6-dii kulan ee wareega bug baxda inta lagu gudajiray.
Braga ayaa laga badiyay mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen wareega bug baxa ee UEFA Europa League, iyagoo ku guuldareystay inay wax gool ah dhaliyaan seddex ka mid ah kulamadaas.